डेब्युदेखि अहिलेसम्म कति बदलिए यी कलाकार ?
८ आश्विन २०७५, सोमवार | Sep 24, 2018 | 22:57:57
By radiojanakpur on	 September 6, 2017 मनोरञ्जन
काठमाडौं, भदौ २१ – समयसँगै सबै मानिसमा परिवर्तन आउनु स्वभाविक नै हो । यस्तै प्रायः सबै कलाकारहरुमा पनि सफलतासँगै परिवर्तन आएको हामीले देखेका हुन्छौं । सुरुवातमा सामान्य रुपमा सिनेमामा प्रवेश गर्ने कलाकारहरुमा सफलतासँग, समयसँगै चमकता थपिएको पाइन्छ । हामीले डेब्युदेखि अहिलेसम्म कति बदलिए त सिने कलाकार ? त्यसको बारेमा एक सामाग्री तयार पारेका छौं । हामीले यस सामाग्रीमा अहिले पनि सक्रिय रहेका केही चर्चित र सफल कलाकारलाई समेटेका छौं ।
अहिले निर्देशकको रुपमा सफलता पाएकी दीपाश्री निरौलाले कलाकारिताको सुरुवात सिनेमाबाट गरेकी हुन् । सिनेमाकी अभिनेत्री बन्नकै लागि दीपाश्री विराटनगरबाट काठमाडौं आएकी थिइन् । उनले २०४९ सालमा सिनेमा ‘संगीनी’बाट सिनेमामा डेब्यु गरेकी हुन् । तर उनले सानो पर्दा अर्थात सिरियलमा भने २०४८ सालमा टेलिसिरियल ‘अग्निपथ’बाट डेब्यु गरेकी थिइन् । उनको डेब्यु सिनेमा र अहिलेको लुक्समा आकाश पातालको फरक भेटिन्छ ।
पहिलेको तुलनामा उनको सुन्दरता पनि बढेको छ । उमेर बढेसँगै उनको सुन्दरतामा भने कुनै पनि कमी आएको छैन । बरु बढ्दै गएको छ ।
अंग्रेजी मिति अनुसार सज् १९८३ को सिनेमा ‘जुनी’मार्फत अभिनेता भुवन केसीले सिनेमामा ब्रेक लिएका हुन् । भुवन केसीले सय भन्दा धेरै सिनेमामा काम गरेका छन् । यी मध्ये पनि उनले काम गरेको सिनेमा ‘कुसुमे रुमाल’ सर्वाधिक चर्चामा रह्यो ।
यस सिनेमाले रजत जयन्ती मनाईसकेको छ । पछिल्लो समयमा उनी अभिनेताको रुपमा भन्दा पनि निर्माता र निर्देशकको रुपमा सिने क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
एकताका सिनेमा क्षेत्रमा राज गरेका भुवनका छोरा अनमोल केसी अहिले सुपरस्टारको रुपमा छाएका छन् । अहिले भुवन आफ्नो भन्दा पनि छोराको लागि सिनेमा व्यस्त छन् ।
सदाबहार सुन्दरीको परिचय पाएकी अभिनेत्री करिश्मा मान्धर अहिले पनि सिनेमा क्षेत्रमै सक्रिय छिन् । उनको अभिनय पातलिँदै गएको भए पनि निर्मात्रीको रुपमा उनी यही क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेकी छिन् । गत वर्ष मात्रै उनले सिनेमा ‘फागु’ निर्माण गरिन् । तर सिनेमाले खासै राम्रो व्यापार भने गर्न सकेन ।
त्यस्तै उनी सिनेमा सम्बन्धि विभिन्न इभेन्टहरुमा सहभागी हुँदै आएकी छिन् । करिश्माले सन् १९८८ मा सिनेमा ‘सन्तान’बाट सिनेमामा डेब्यु गरेकी हुन् । यस सिनेमामा उनी अभिनेता भुवन केसीकी श्रीमतीको भूमिकामा छिन् ।
अभिनेता राजेश हमाल नेपाली सिनेमा उद्योगका पढेका कलाकारहरुको सूचिमा पर्छन् । पछिल्लो समयमा स्नातकोत्तर गर्ने अन्य कलाकारहरु थपिए तर एकताका भने राजेश हमाल मात्रै थिए जसले स्नातकोत्तर गरेर पनि सिनेमामा हिरो बनेका थिए । राजेशले सिनेमा ‘युग देखि युग सम्म’बाट सिने नगरीमा प्रवेश गरेका हुन् । सय भन्दा धेरै सिनेमामा काम गरिसकेका राजेश पछिल्लो समयमा भने सिनेमा भन्दा बढी विज्ञापनहरुमा व्यस्त छन् । यसका साथै उनी वैवाहिक जीवनमा पनि रमाईरहेका छन् ।
किशोर रानाको निर्देशन तथा भुवन केसीको सिनेमा ‘करोडपति’बाट अभिनेत्री शुष्मिता बोम्जन केसीले सिनेमामा डेब्यु गरेकी हुन् । यो सिनेमामा उनले भुवन केसीको को–स्टारको रुपमा काम गरेकी छिन् । आफ्नै श्रीमानको सिनेमाबाट डेब्यु गरेकी शुष्मिता अहिले भने भुवनबाट अलग भइसकेकी छिन् । तै पनि उनी सिनेमामा भने सक्रिय छिन् । बेलाबखतमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले चर्चामा आउने गरेकी शुष्मिता अभिनयमा नभएर फिल्म निर्माण र निर्देशनमा सक्रिय छिन् ।
गत वर्ष उनले सिनेमा ‘म त तिम्रै हुँ’ ले अपेक्षाकृत रुपमा राम्रो गर्न सकेन । तर यतिबेला उनी सिनेमा ‘बाँबरी फूलको बोट’को तयारीमा जुटेकी छिन् ।
१७ वर्ष अघि देशभक्त खनालको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘पिंजडा’ मार्फत सिने नगरीमा डेब्यु गरेका अभिनेता निखिल उप्रेती अहिले झनै खारिएर सिनेमामा सक्रिय भएका छन् । नेपाली सिनेमामा सफल भईसकेपछि पाँच वर्ष उनी मुम्बई बसेर आए । उनले पाँच वर्षपछि सिनेमा ‘भैरव’ मार्फत कमब्याक गरे । त्यसपछि उनी लगातार सिनेमा खेलिरहेका छन् ।
यतिबेला उनी सिनेमा ‘कमिटमेन्ट सिक्स्टी आवर्स’को छायाकंनमा जुटेका छन् । त्यस्तै उनी डेब्यु सिनेमा ‘पिंजडा’को सिक्वेल ‘पिंजडा ब्याक अगेन’को काममा पनि जुटेका छन् ।
अभिनेता रमेश उप्रेती भिलेन बन्दा बन्दै हिरो बनेका हुन् । सिनेमा रगतमा भिलेनको रुपमा डेब्यु गरेका रमेशले भुवन केसीको सिनेमा करोडपति र दीपक रायमाझीको सिनेमा यो मायाले लौन सतायोमा पनि भिलेन भएरै काम गरे । पछि उनले सिनेमा पराइघरमार्फत मुख्य अभिनेताको रुपमा सिनेमामा ब्रेक लिएका हुन् । सिनेमामा सफल भइसकेपछि रमेश बीचमा सात वर्ष अमेरिकामा बसेर फेरि सिनेमा ब्रासलेटमार्फत गत वर्ष कमब्याक गरेका छन् । अहिले रमेश सिनेमा ‘ऐश्वर्य’को प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् ।
अभिनेत्री सञ्चिता लुईँटेल विवाहपछि दुई सन्तानकी आमा हुँदा पनि सिनेमामा सक्रिय छिन् । सिनेमा ‘अप्सरा’बाट सिने नगरीमा डेब्यु गरेकी सञ्चिताले त्यसपछि दर्जनौँ सिनेमामा काम गरिन् । उनले काम गरेका सिनेमा मध्ये माया त माया हो, कोही मेरो, चट्टान, सम्झना, दाग, चोर सीपाही लगायत लोकप्रिय बने ।
आमा बनेपछि उनले गतवर्ष सिनेमा ‘राधा’मा मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा काम गरिन् । त्यस्तै उनी अभिनित सिनेमा ‘लिला’ र ‘खतरनाक’ पनि प्रदर्शनको तयारीमा छन् ।
अभिनेत्री निर्मात्री हुँदै निर्देशक बनेकी झरना थापाले विवाह अघि सिनेमा ‘दाइजो’मार्फत सिने नगरीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यस सिनेमामा उनलाई नयाँ प्रस्तुतिको रुपमा देख्न सकिन्छ । विवाह पछि झरना थापाको रुपले परिचित भएकी झरनालाई यस सिनेमामा झरना राजभण्डारीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विवाह अघि नै सिनेमामा प्रवेश गरेको भए पनि उनी व्यावसायिक रुपमा भने विवाह पछि अघि बढिन् । डेब्यु सिनेमा दाईजोमा उनी हरिको भूमिकामा छिन् ।
१६ वर्षको उमेरमा सिनेमा ‘हिरो’बाट नेपाली सिनेमामा ब्रेक लिएकी अभिनेत्री रेखा थापा अहिले निर्मात्री, निर्देशक सबै बनिसकेकी छिन् । अहिले उनले निर्माण गरेको सिनेमा ‘रुद्र प्रिया’ रिलिजको तयारीमा छ । एसएलसी दिएलगत्तै सिनेमामा प्रवेश गरेकी रेखामा पनि समयसँगै धेरै परिवर्तन आएको छ । रेखाले सय भन्दा धेरै सिनेमामा काम गरेकी छिन् । उनले काम गरेका सिनेमामध्ये, हिरो, किस्मत, धड्कन, हिफाजत, रावण, हिम्मत, मितिनी हिम्मतवाली, काली लगायत चर्चामा छन् ।
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको पहिलो सिनेमा हो ‘सानो संसार’ । आलोक नेम्वाङको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘सानो संसार’बाट मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यु गरेकी नम्रताले बाल कलाकारहको रुपमा भने सिनेमा ‘संगीनी’मा काम गरेकी थिइन् । नम्रताले सानो संसार पछि सिनेमा मेरो एउटा साथी छ, नोभेम्बर रेन, क्लासिक, पर्व लगायतका सिनेमामा काम गरेकी छिन् । नम्रता नेपाली सिने उद्योगकी महंगी अभिनेत्री पनि हुन् ।
कामको हिसाबले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको पहिलो सिनेमा हो ‘मेरो बेस्ट फ्रेण्ड’ । तर रिलिजको हिसाबले भने उनको पहिलो सिनेमा ‘कलिवुड’ हो । अहिले नेपाली सिनेमा क्षेत्रकी फेशन आइकनको रुममा चिनिएकी प्रियंका कार्की पनि पहिलो सिनेमामा भने सामान्य देखिन्छन् ।
उनको पहिलो सिनेमाको लुक्स र अहिलेको लुक्समा धेरै परिवर्तन देखिन्छ । यतिबेला प्रियंका सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’, ‘फाटेको जुत्ता’को प्रमोशनमा जुटेकी छिन् ।